Ejipta: Androm-pifidianana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Desambra 2011 7:01 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Nederlands, عربي, Italiano, Svenska, English
Handeha hifidy izay ho solombavambahoakany ny Ejypsiana ny 28 sy 29 Novambra 2011 [Naotin'ny mpandika: mbola tsy nandeha tamin'ny nanoratana ny lahatsoratra fototra] , na dia eo aza ny fiantsoana tsy hifidy, dia hita fa nanapa-kevitra handray anjara avokoa ny ankamaroan'ny olona.
Tsy ny Ejypta rehetra no handeha hifidy amin'io daty io; satria nozaraina dingana telo ny fifidianana, izay samy ahitana governorà sivy. Ny tanàna ao Kairo sy Alexandria no dingana voalohany handray ny fifidianana.
Tsy hifidy ny sasany noho ny antony manokana, tahaka ilay mpamaha bolongana sady mpanao gazety Sarah Carr, izay nanoratra hoe:
Raha mety manontany ianao, tsy handeha hifidy aho. Ary tsy handeha hifidy toy izany koa ireo olom-pantatro. Misy ny antony mazava hanoherana ny fifidianana (angamba mety hanampy amin'ny fanakanana ny herin'ny mpitana ny mahazatra izany) tsy hanova ny hevitro anefa izany fa ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana dia hampanao izay haha-ara-dalàna ny fitondrana izay tsy mendrika izany akory, noho ny fandraisany ireo Ejypsiana ho toy ny ankizy tsy misaina sy ny fanehoan-kevitra nandritra ity tetezamita tsy mety tapitra ity izay fomba nentiny hamonoana olona sy hananganana rindrina.
Nisafidy tsy handeha hifidy ihany koa i Ismail Naguib:
Ho ahy, ny tsy fandehanana hifidy dia misy fahalemena ihany. Inoako fa tokony takian'ny vahoaka fa ny olom-pirenena tsy azo hozongozonina (angamba amin'ny endrika Praiminisitra matanjaka) na filankevitrin'ny olom-pirenena (angamba amin'ny endrika Filan-kevitry ny Filoha) no tokony manam-pahefana manaramaso ny minisitra izay misahana ny fikarakarana ny fifidianana solombavambahoaka. Raha izay tokoa no hiseho, amin'ny fisainana milamina, tsy handray anjara amin'ny fifidianana solombavambahoaka aho izay hanome fankatoavana ny fahefana didy jadona, izay ny tombotsoany manokana no ambony fa tsy ny tombotsoam-pirenena.
Tamin'ny fiafaran'ny androm-pifidianana voalohany, tsy resy lahatra i Mostafa Hussein:
@moftasa: Malalaka tanteraka ny fifidianana ho an'ny parlemanta izay tsy toy izany akory.
Sherief Gaber nanambara hoe:
@cairocitylimits: Tsy maninona izay hofidianao, fa ho voafidy ny fitondrana. #Egypt
Na dia izany aza, betsaka tamin'ireo Ejypsiana no nandeha nifidy, nahitana filaharam-be manerana ny firenena.
Miandry ny fizarana taratasim-pifidianana. Sary avy amin'ny mpisera Twitter @Selnadeem
Tsy kivy tamin'ny fiandrasana ela be i Pakinam Amer :
@pakinamamer: roa ora sahady izay no lasa, mbola mitsangana milahatra eto foana. Fantatrao tokoa fa sarobidy ny demokrasia (!) #lol #egyelections
Tsy kivy toy izany ihany koa ilay mpisera Twitter @CokiCoussa:
@CokiCoussa: Raha mahita ny filaharam-be eto ianao, dia mety hihevitra fa tsy misy fiafarany mihitsy izany, kanefa tsy mahakivy anao izany na hoe zavatra mahasosotra, fa manome hery anao indray aza 🙂
Nada Heggy nanontany hoe:
@NadaHeggy: Nahoana no tsy afaka mifidy amin'ny alalan'ny aterineto isika toy izay milahatra be mandany fotoana fotsiny #Egyelections.
Filaharam-be tao amin'ny birao fandatsaham-bato Aleksandria. Sary avy amin'ny mpisera Twitter @mfatta7
Mohamed El Dahshan nahatsiaro izay vita tamin'ity fotoana ity :
@TravellerW: Eny. Afaka hifidy ankehitriny, ho fahatsiarovana ireo maritioranay, ny mpanao fihetsiketsehana, sy ny gadra tsy manan-tsiny. #EgyElections #Tahrir
Tao ambanivohitra Zamalek, Fatenn Mostafa nihaona tamin'ireo mpifidy hafa izay mahatsiaro ireo voavono:
@FatennMostafa: Marobe ireo vehivavy miakanjo mainty nandritra ny filaharana tao zamalek! Namaly izy ireo hoe: Ho fahatsiarovana ny #egymartyrs. #egyelections #Egypt
Na dia teo aza ny filaharam-be, sy ny tsy fahatomombanan’ ny fizotry ny fifidianana, ary ny fiampangana ny hosoka, dia nisy hatrany ny fientanentanana.
Mpifidy ao Assiut. Sary avy amin'ny mpisera Twitter @LaurenBohn
Mpanao gazety kanadiana Firas Al-Atraqchi niresaka tamin'ny mpifidy tao Kairo:
@Firas_Atraqchi : Tamin'ny resaka nataoko tamin'ireo sasany nilahatra hifidy, toa tsapako fa nahafoy fotoana be tamin'ity fifidianana ity izy ireo. Te haneho hevitra mafy izy ireo #Egypt
Be fanantenana i Mosa'ab Elshamy:
@mosaaberizing: Nitety birao fadatsaham-bato 5 samihafa aho androany. Faly ny olona teo am-pilaharana ary nifidy tamim-pifaliana. Na dia teo aza ny tsy fetezana, nahafinaritra ny tontolo andro.
Be fanantenana ihany koa i Mohamed Soliman:
@msoliman7: Mirehareha noho ireo Ejypsiana nitsangana ela be sy mbola miandry eo am-pilaharana, miraikitra eo an-tananao misy ranomainty ny ampitso. #EgyElections